दुबई बाट नेपाल फर्किएका १०१ जना महिला मध्ये ९४ जना गर्भवती, हेर्नुहोस पूरा बिवरण सहित -
दुबई बाट नेपाल फर्किएका १०१ जना महिला मध्ये ९४ जना गर्भवती, हेर्नुहोस पूरा बिवरण सहित
काठमाडौं। संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएईको दुबईबाट पहिलो चार्टड बिमान उडेको छ । १ सय ४८ जना नेपाली बोकेर नेपाल एयरलाइन्सको आरए २२९२ नम्बरको न्यारोबोडी जहाज केहीबेरअघि उडेको हो।
आज फर्किएका सबै जना दूतावासको फारम भरेर प्राथमिकता मा परेका नागरिक हुन् । फर्किनेमध्ये १ सय १ जना महिला र ४७ जना पुरुष रहेका यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाए को छ ।१ सय १ जना महिलामध्ये ९४ जना गर्भवती छन् ।
उडानमा १० जना बिभिन्न रो’गका कारण बि’रामी छन् भने १० जना रोजगा रदाता भागेपछि अ’लप’त्र नेपाली श्रमिक रहेका दूतावासले जनाएको छ।फर्किनेमध्ये ३ जना जेष्ठ नागरिक समेत रहेका छन् । गर्भवतीमध्ये २७ जनाका श्रीमान् पनि साथमै नेपाल फर्किएका छन् भने बाँकी यूएईमै कार्यरत रहेको र भिजिट भिसामा श्रीमान् भेट्न यूएई पुगेकाहरु हुन्।
आज उडेको विमानमा एक जनाको श’व पनि नेपाल पठाइए को छ। गएको चैत २८ गते यूएईको फुजेराहमा ब्रेन ट्युमरका कारण ज्या’न गु’माएका सिन्धुपाल्चोकका पेमा नुर्बु यल्मोको श’व नेपाल पठाइएको नेपाली दूतावासकी श्रम काउन्सिलर निर्मला थापाले जानकारी दिनुभयो।
आज विभिन्न देशबाट चार सय १४ जना नेपाली स्वदेश फर्किए का छन् । कुवेतबाट जजिरा एअरमार्फत एक सय ५० जना, ओमानबाट सलाम एअरमार्फत एक सय ४६ जना, दोहाबाट कतार एअरमार्फत एक जना र मलेसियाबाट हिमालय एअर मार्फत एक सय १७ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ।
यसैगरी आज नेपालबाट चार वटा हवाइजहाज विभिन्न देशमा गएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलका अनुसार १५ जना नेपाली र एक जना विदेशी लिएर हिमालय एअर मलेसिया गएको छ । १३ जना बालबालिकासहित दुई सय ६३ जना यात्रु लिएर कतार एअर दोहा गएको छ ।
चार जना विदेशी लिएर हिमालय एअर दमाम र नेपाल एअर लाइन्सको जहाज यात्रु विना नै दुबई गएको छ।यस्तै आन्तरिक तर्फ तारा, सीता, एअर डाइनेस्टी, बुद्ध र मनाङ एअरले ६ वटा उडान गरेका छन्।
← यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं ! हेर्नुहोस पूरा बिवरण सहित
यसरी सम्पर्कमा आउँछन् श्रीमान बि’देशमा भएकाका श्रीमती र ए’कल महिला पूरा हेर्नुहोस् →